Okungcono Easy Tips for Train kukuba abasoloko Kufuneka ukuba uhlole iingxowa ngaphakathi kwaye ukuba zinobungakanani obufanelekileyo ungakhetha nokuzigcina kwirakhi engaphezulu kwesihlalo okanye uzifake kwisithuba esingunxantathu phakathi kwezihlalo ezibuyela umva. Le ndlela une ezingxoweni zenu kufutshane kuwe maxa onke amaxesha.
Ukugcina ixesha kunye nemali zama kwaye usebenzise ezi ngcebiso zilula zoLoliwe kwaye usebenzise izindlu zangasese kuloliwe ngokuchasene nokusebenzisa ezisesitishini. Zangasese Uloliwe ngokuqhelekileyo zibekwe ekupheleni ezimotweni yaye bacocekile kakhulu kunabanye zangasese kwizikhululo, kwakunye nokuba free.
ICEBISO ASIXHENXE: Thetha nabahlali kunye nabanye abahambi
Icebiso 7 aphume Top yethu 10 Tips lula Train Riding Smart, Yintoni indlela engcono ukufunda malunga isixeko okanye ilizwe kunokuba ngokuthetha kwayo bakule, okanye ezinye abahambi ekusenokwenzeka ukuba baye kuloo ndawo uya? Baya kukwazi ndinichazele ins kunye outs yakho indawo ekuyiwa kuyo nokucebisa ukuba ngoko ukukwenza noko ukwenza. Zama laphula umkhenkce ngokubuza umbuzo, ukunikela okumnandi, okanye ubonise into evela kwidolophu yakho.
Yazi isikhululo yenye Tips kubalulekile Easy ukuhamba Qeqesha. Xa ufika esixekweni unokuma kwizikhululo zeedolophu ezininzi ezineempawu ezibonisa igama lendawo oya kuyo kunye ne igama lendawo yokuhlala, kodwa musa xhumela off ude ube ufikelela isikhululo central. Unakho ukucela amanye abakhweli okanye ujonge incwadi yakho uncedo olungakumbi.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/top-10-easy-tips-for-train-riding-smart?lang=xh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)